Maciej Kuciara kunye nombono wakhe omnandi "kuThixo waseYiputa" | Izidalwa ezikwi-Intanethi
'UThixo wase-Egypt' nguMaciej Kuciara
UMaciej Kuciara usenokungavakali ngathi nantoni na ekuqaleni, kodwa ukuba siqala ngokuthi ungumculi osebenze kwimidlalo yevidiyo enje ngeCrysis, eyokugqibela kuthi okanye iHalo 4, kunye kwiimuvi ezinje nge-X Men kunye ne-Guardians ye-GalaxyNgokuqinisekileyo uya kuqala ukulithathela ingqalelo igama lakhe.
U-Kuciara usizisa kule migca umzekeliso omkhulu wekhwalithi kanye njengokuba 'enguThixo wase-Yiphutha', umsebenzi osisa phambi kwempucuko yase-Egypt enokuba yinxalenye ye-Dune okanye umboniso wefilimu Ibali leNgcaciso xa uAtreyu edlula phambi kwale mifanekiso mikhulu mikhulu.
Umsebenzi wobunjani obukhethekileyo apho emazantsi kuwo sifumana i- intaba apho kumi khona isakhiwo esikhulu ukukhanya okuthe nkqo ngokuthe nkqo kuphuma kwiinkwenkwezi esibhakabhakeni.
U-Kuciara usebenze nabathengi njengoko benjalo I-Crytek, iDisney, i-Dreamworks okanye iColumbia phakathi kwabanye. Umzobi womgangatho ophezulu kodwa ngubani onokuthi ngamanye amaxesha angabonakali phakathi kwezihloko zekhredithi zezo bhanyabhanya apho ubugcisa bakhe obubonwayo obuyinxalenye yamabali kunye neengcinga abazicebisayo, njengakule Guardians yeGalaxy esele siyilindile. Inxalenye.
Lo mzekeliso ubizwa ngokuba "nguThixo wase-Egypt" usisa nase Stargate, a I-sci-fi franchise eyazalwa kwi-1994 ukusuka kwisandla sikaDean Devlin kunye noRoland Emmerich. Le ntlango kunye nezo nkwenkwezi zidibene nezinye zezona zinto zibalulekileyo zeStargate, ke ngoko kukho iimvakalelo ezininzi ezifumaneka kolu luhlu lobugcisa.
U-Kuciara unayo facebook wakho e Instagram ukuze ulandele umsebenzi wabo. Njengokuba yakho Behance y Kwiwebhu ukulungiselela abo uneprofayile evulekileyo kule nethiwekhi yoluntu ejolise kumagcisa. Umsebenzi omkhulu ukulandela esi sibini saseValencian esebenza kubathengi abanjengo-20th Century Fox.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » 'UThixo wase-Egypt' nguMaciej Kuciara